मेरुदण्ड दुख्ने रोगको प्राकृतिक उपचार सम्भव छ : डा. संजोग कुमार क्षेत्री » नेपालय टाइम्स
Home / स्वास्थ्य / मेरुदण्ड दुख्ने रोगको प्राकृतिक उपचार सम्भव छ : डा. संजोग कुमार क्षेत्री
June 18, 2019	Leaveacomment 579 Views
हाम्रो शरीर मेरुदण्डको सहारामा उभिएको हुन्छ । त्यसैले पनि शरीरका लागि मेरुदण्ड अति महत्वपूर्ण अंग हो । कहिलेकाहीँ मेरुदण्डमा देखिने सामान्य समस्याले पनि दैनिक काममा बाधा उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले मेरुदण्डको सुरक्षाप्रति मानिस सचेत हुन आवश्यक छ । कतिपय लापरबाहीका कारण मेरुदण्डबारे विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । मेरुदण्ड (गर्दन, ढाड, कम्मर) दुख्ने समस्या आम नेपालीको साझा समस्या हो । यसबाट विद्यार्थी, गृहिणी तथा कर्मचारी बढी पीडित भएको पाइन्छ । यसको उपचार तथा हेरचाह कसरी गर्ने ? प्राकृतिक रुपमै यसको उपचार गर्न सम्भव छ त ? भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १२, आस्थाचोक, चितवनमा रहेको अत्याधुनिक प्रविधिसहितको चित्रवन प्राकृतिक चिकित्सालयका डा. संजोग कुमार क्षेत्रीका अनुसार यसको प्राकृतिक उपचार सम्भव छ । मेरुदण्डलाई स्वस्थ राख्न डा.संजोग कुमार क्षेत्रीले केही टिप्स दिएका छन् :
हाम्रो समाजमा रोग लाग्नेबित्तिकै उपचार गराउने प्रवृत्ति छैन । सामान्य त हो, दुई–चार दिनमा ठिक भइहाल्ला नि भन्ने आम मानसिकता छ । मेरुदण्ड दुख्ने बिरामीको हकमा पनि यस्तै हो । सामान्य ढाड दुख्यो भने सुरुमा बिरामी डाक्टर कहाँ जान मान्दैनन् । अलिकति ढाड दुखेको त हो । दुई–चार दिनपछि आफै ठीक भइहाल्ला नि भन्ने बिरामीको मानसिकता हुन्छ । ठूलो समस्या न निम्तिएसम्म ऊ उपचार गर्न जाँदैन । उपचारमा गरिने हेलचेक्र्याइले नसा च्यापिने समस्या देखिन सक्छ । समस्या जति सानो भयो त्यति त्यसलाई बुझ्न र समाधान गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले यदि ढाड दुख्न सुरु हुनेबित्तिकै सम्बन्धित विशेषज्ञकहाँ गएर चेकजाँच गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
पोस्चरको ख्याल राखे मेरुदण्डको समस्या नै हुँदैन । तर, पोस्चरको ख्याल नराखे अप्रेसन गरे पनि रोग निको हुँदैन । मेरुदण्डको उपचारमा यो भन्दा महत्वपूर्ण केही पनि छैन । शरीरको पोजिसन अथवा शारीरिक अवस्थाको ख्याल राख्नुलाई पोस्चुरल केयर भनिन्छ ।
पोस्चुरल केयर गर्दा ५ कुरा सधैं याद राख्नुपर्छ
– बस्दा चित्रमा जस्तै एकदमै सही पोजिसनमा नै बसौं
– एक पटकमा १५ मिनेटभन्दा बढी नबसौं
– निहुरिएर वा भुँइमा बसेर काम नगरौं
– निहुरिएर कहिलै सामान नउठाऔं
– उठिरहेर काम गर्नुभन्दा यताउती हिँडेर काम गर्ने गरौं
टेबुल वर्कमा वा कम्प्युटरमा बस्दा कुन पोजिसनमा बस्ने ? कम्प्युटरको मनिटर कति टाढा राख्ने ? कि बोर्ड कहाँनेर राख्ने ? यी सबै चिजमा हामीले ख्याल राख्नुपर्छ । टेबुल वर्कमा आफू बसेको कुर्सीलाई टेबुलभित्र घुसाइ दिनुपर्छ ताकि हामी निहुरिन नपरोस् । टेबुल जति टाढा भयो त्यति निहुरिनपर्ने हुन्छ । काम गर्दा कुर्सीभित्र घुस्यो भने ढाड सिधा राखेरै काम गर्न सकिन्छ । स–साना जस्तै लागे पनि यी महत्वपूर्ण कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।
यदि कुर्सीमा बसिराख्नुभएको छ भने हाम्रो हिप अर्थात् पुट्ठाले कुर्सीको पछाडिको भाग छोएकै हुनुपर्छ अर्थात् ढाडलाई राम्ररी पछाडि सपोर्ट दिएकै हुनुपर्छ ।
कुर्सीमा अगाडि झुक्नुको साटो सिधा बस्नुपर्छ । कुर्सीमा सिधा ९० डिग्रीमा नबसेर हल्का पछाडि सपोर्ट लिएर बस्दा मेरुदण्डमा चाप कम हुन्छ । तर त्यसरी बस्दा हिपले कुर्सीको पछाडि धकेलेकै हुनुपर्छ ।
उठिरहनु पर्नेले बरु यताउता हिँडडुल गर्ने थोरै बेर बस्ने वा सम्भव छ भने उठिरहँदाखेरि एउटा खुट्टा स्टुलमा राख्ने गर्नुपर्छ । लामो समय बसिरहने वा उठिरहने गर्नुहुँदैन । कामको बीचबीचमा हरेक घण्टामा ब्रेक लिएर ५ वा १० पटक हल्का पछाडि उल्टो झुक्ने वा केही तन्काउने खाले व्यायाम गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ ।
सामान उठाउँदा कहिल्यै पनि निहुरिएर नउठाउने तथा यसको साटो चित्रमा जस्तै पहिला बस्ने अनि बसेर ढाडलाई सिधा राखेर मात्र सामान समाई उठाउने गर्नुपर्छ । माथिका यी बानीले हाम्रा ७० प्रतिशत ढाडका समस्या हटाउन सकिन्छ ।
रोग अनुसारको पोस्चुरल केयर हुन्छन्, जुन विशेषज्ञले मात्र सिकाउन सक्छन् ।
मेरुदण्ड दुख्ने रोगका बिरामी उपचार गराउँदा गराउँदै हैरान भएका हुन्छन् । डाक्टरले प्रेस्क्रिपसन गरेको औषधी खाँदा र थेरापी गराउँदा पनि रोग सन्चो हुँदैन ।
जसरी खाना खाँदा भात, दाल, तरकारी, सलाद, दहीको जरुरत पर्छ, त्यसरी नै थेरापीहरूमा पनि एउटा राम्रो सामन्जस्य रूपमा काम गर्ने खालको कम्बाइन्ड औषधोपचारको जरुरत पर्छ । यो संयोजन राम्रो भएन भनेजस्तै रोग पनि ठिक नहुने हुन सक्छ । औषधोपचारसँग उपयुक्त खानपिन, व्यायाम तथा केयर अनि घरमै गर्न सकिने उपचारहरू पनि सिक्नु जरुरी हुन्छ ।
सर्वप्रथम विशेषज्ञ कहाँ गएर चेक गराई सल्लाह लिनुपर्छ अनि मात्र सुहाउँदो तथा फाइदा दिने खालका उपचारहरूको एकीकृत उपचार लिनुपर्छ ।
यदि गर्दन, ढाड, कम्मरसम्बन्धि कुनै समस्या छ भने पहिला विशेषज्ञकहाँ गएर चेक गराई सल्लाह लिनुपर्छ अनि मात्र सुहाउँदो तथा फाइदा दिने ढाडका व्यायाम मात्र गर्ने गर्नुपर्छ । दुखेको बेलामा व्यायाम नगर्नुस् ।
मेरुदण्ड विशेषज्ञले सिकाएका व्यायाम मात्र गर्नुस् । कुन खाले व्यायाम, कति गर्ने, स्पष्ट सिकेर मात्र गर्नुस् । ढाडलाई स्वस्थ राख्न व्यायामको अर्को विकल्प छैन । तीन किसिमका व्यायाम गर्नु एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
१. पसिना निकाल्ने जस्तै हिँड्ने तथा दौडने खालेतन्काउने खाले योग वा स्ट्रेचिङखाले व्यायाम ।
२.शरीर तथा ढाड बलियो बनाउनेखाले व्यायाम ।
३‍. व्यायाम विशेषज्ञले भने बमोजिम मात्र गर्नुपर्छ
ढाडलाई स्वस्थ राख्न खानपानमा ध्यान दिनु एकदमै जरुरी छ । जसरी सम्पूर्ण शरीरका लागि खानपान महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसरी ढाडका लागि पनि प्रशस्त पानी तथा क्याल्सियम भएका शाकाहारी खाना महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्का साथै कुलत, चिनी, प्याकेटका जंक वा फास्ट फुडबाट टाढै रहनुपर्छ ।
भिटामिन डी कम हुने, पानी कम पिउनेमा झस्का पस्ने समस्या आइरहने तथा क्याल्सियमको कमीले हड्डी खिइने हुनसक्छ ।
आजभोलिका धेरै मानिसहरूमा भिटामिन डीको कमी छ । जसले गर्दा शरीरमा क्याल्सियम जम्मा हुन सकिरहेको छैन तथा हड्डी कमजोर हुँदै जान्छ वा दुखाई ठिक हुँदैन ।
भिटामिन डीको लागि सबैभन्दा राम्रो घाम ताप्न सकिन्छ । दिन को १५ मिनट बिहान कपडा खोलेर नांगो छालामा घाम ताप्नु एकदमै राम्रो हुन्छ । भिटामिन डीका औषधिहरू पनि पाइन्छन् ।
Previous अभिनेत्री तथा निर्मात्री केसी चितवनमा सम्मानित
Next लोक सेवा आयोगले स्थानिय निकायको आवेदनमा डबल दस्तुर तत्काल नलिने
ओमानमा परदेशमा घरदेश कार्यक्रम सम्पन्न नेपालयटाईम्स काठमाडौँ ईमल इभेन्ट्सले ओमनमा नेपाली राजदुतावास ओमनको सहकार्यमा “परदेशमा …